Guggulsterone vovoka (95975-55-6) hplc≥98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Guggulsterone vovoka
SKU: 95975-55-6. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mampiasa sy ny famokarana maotera avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Guggulsterone vovo (95975-55-6), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Guggulsterone volo video
Vovoka Guggulsterone roapolo ireo karazana fototra
Name: Guggulsterone vovoka
Meny fitetezana 312.45
Melt Point: 170-171.5 ° C
Color: Hazavana mavo mavo
Ny vovony Guggulsterone Rohila ampiasaina
Ny vady aman-janaka, balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-Résine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone poids, sns.
Guggulsterone fampiasana vovoka
Ny vovoka Guggulsterone dia phytosteroid hita ao amin'ny hodi-kazo ao amin'ny orinasa guggul, Commiphora mukul. Ny vovony Guggulsterone dia mety misy amin'ny stereoisomers roa, E-Guggulsterone vovoka ary Z-Guggulsterone vovoka. Ao amin'ny olombelona, ​​dia mihetsika toy ny mpanohitra ny receptor farnesoid X izy io, izay nino taloha fa miteraka ny fihenan'ny koloroola ao amin'ny aty. Maro ny fanadihadiana izay navoaka izay tsy milaza fa ny fihenan'ny kolokoloka manontolo dia miseho amin'ny fampiasana vovoka isan-karazany amin'ny vovobony Guggulsterone, ary ny lopoproteine ​​ambany ("cholesterol") dia nitombo tamin'ny olona maro. Na izany aza, ny vovo-dronono Guggulsterone dia singa iray ao amin'ny fanampiana ara-tsakafo maro.
Ny hormonina Oleogum (fantatra amin'ny anarana hoe guggul) avy amin'ny hazo guggul, Commiphora mukul, hita any India, Bangladesh ary Pakistan, dia nampiasaina mba hanehoana aretina isan-karazany, anisan'izany ny cholesterolemia, atherosclerose, rheumatism, ary ny hatavezina nandritra ny an'arivony taona maro. Ny vovoka Guggulsterone avy ao Guggul dia fantatra ho ny solontenan'ny bioactive tompon'andraikitra amin'ny vokatra ara-pahasalaman'ny guggul. Hatramin'ny fandalinana voalohany mampiseho ny vokatry ny fitsaboana guggul amin'ny modelin'ny biby ao amin'ny 1966, dia nisy ny diplaoma maro sy ny toeram-pitsaboana marobe. Na dia eo aza ny fahasamihafana eo amin'ny famolavolana fandalinana, ny kalitaon'ny metodolojika, ny fandalinana statistika, ny habeny, ny isan'ny olona voan'ny aretina, ny vokatra azo avy amin'ny fitsaboana, Soratra amin'ny teny ayurvedika fahiny. Na izany aza, ny fianarana amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny endriny lehibe kokoa sy lava kokoa dia ilaina mba hanamafisana ireo filazana ireo. Ny soa avoakan'ny fitsaboana dia vokatry ny asam-panafody isan-karazany mifandraika amin'ny vovoka guggul na Guggulsterone, indrindra fa ny hôpitaly, ny antioxidant, ary ny fiasan-tsakafo. Voamarina fa ny vovobony Guggulsterone dia mpanohitra ao amin'ny recepsor farnesoid x (FXR), mpandrindra fanodinana fototeny manan-danja amin'ny fikojakojana cholesterol sy ny homoosthase asidra. Ny fanoherana ny FXR an'ny poety Guggulsterone dia natolotra ho fitaovana ho an'ny fiantraikany amin'ny hypolipidemika. Ny fanadihadiana natao vao haingana dia manaporofo fa ny vovobony Guggulsterone dia mampitombo ny valan-davenona fanondranana sira (BSEP), mpanodina efflux tompon'andraikitra amin'ny fanesorana metabolites cholesterol, asidra malemy avy amin'ny aty. Ny fampihorohoroana ny famoahana BSEP avy amin'ny vovobony Guggulsterone dia manosika ny metabolisma kolesterol ho lasa asidra miteraka, ary izany dia maneho fomba hafa mety ho an'ny hipolipidemika. Ny vovoka Guggulsterone dia hita fa manakana ny fampidinana ny singa nokleary-kappaB (NF-kappaB), mpitsikera manan-danja amin'ny valin-kafatra manimba. Ny famoretana ny famindrana NF-kappaB avy amin'ny vovobony Guggulsterone dia natolotra ho fitaovana amin'ny voka-dratsin'ny valan'aretina Guggulsterone.
Iza no mila an'izany?
Ary Inona avy ny soritr'aretina sasany?
Nanjary tsapako fa raha misy ny mampifangaro ny vokatry ny hormonina hormonina amin'ny tiroida sy ny hormone adrenergic (ohatra adrenaline), dia mety hisy vokany tena mahatalanjona. Ny mahaliana ihany koa dia ny fihenan'ny tabilao ECA amin'ny ankapobeny hampihenana ny habetsan'ny hormones tiroida mivezivezy ao amin'ny ra mandritra ny fotoana voafetra. Ny pansera Guggulsterone dia manao asa goavana amin'ny fampihenana io fihenam-bidy io, ka hihazona ny rafi-pandaminana matavy ara-batana miasa amin'ny ambaratonga fara-tampony.
Ny fomba farany ahafahan'ny mpanotrona Guggulsterone mandray anjara amin'ny ady amin'ny fandefana tavin-kena dia ao anatin'ny sakafo ketogenika sy ny fampiasana hormone fampandrosoana. Rehefa mandeha ny fotoana, dia mihena ny fihenan'ny tiroidan'ny ketogenea amin'ny alalan'ny fampihenana ny fiovan'ny T4 amin'ny T3 matanjaka kokoa. Ankoatra izay, ny pilotra Guggulsterone dia nalaina isan'andro nandritra ny volana 3, dia nitarika ny fihenanam-pandrefesana ny lesoka amin'ny ankamaroan'ny marary. Amin'ny tetracycline, ny fampihenana ny isan-jato dia ny 65.2% raha oharina amin'ny 68% amin'ny gowdgulsterone powders. Araka ny hitanao, ny Guggul namana dia tena mahery vaika amin'ny ady amin'ny akne.
Iza no afaka mandray soa avy amin'izany? Hmmm !!! Eny, araka izay azoko lazaina, saika ny rehetra. Tsy misy olona iray fantatro izay tsy te hanana endrika tena tsara. Tena marina izany ho an'ny olona amin'ny steroids anabolic / androgenic satria ireny dia mampitombo ny lanjan'ny hoditra sy ny mety ho akne. Avelao aho haminavina - tsy misy olona mihomehy amin'ny Mr. Huggulee Guggulee! Raha ny marina dia mety hanana anarana mampihomehy izy saingy ao amin'ny bokiko dia mahery fo izy. Aiza koa no ahitanao fitambaran-javatra iray izay hanampy anao hihena matavy, hanatsara ny fizotry ny kolôlisolanao, ary hanatsara ny endrik'olon-tsainao? Nijery ela sy sarotra aho ary mbola tsy nahita na dia mpifaninana iray aza.
Firy no tokony horaisina?
Ary misy fiantraikany hafa ve?
Oh yeah! Alohan'ny hanadinoako, ny dosage tokony haka dia 30-60mg intelo isanandro amin'ny sakafo.
Tadidio foana ny hahita ny vokatra iray izay ahitana ny Guggul voajanahary voajanahary voajanahary! Ny torohevitro farany dia ny mivoaka sy hahita ity lehilahy ity, mihozongozona ny tanany, ary avy eo dia mijinja ny tombony azony.
Fampitandremana amin'ny vovoka Guggulsterone
Ny famoloana mavo iray avy amin'ny orinasa guggul dia misy tsiranoka antsoina hoe Guggulsterone sy ny hafa. Ny fandinihana momba ny laboratoara dia nahatsikaritra fa afaka manova ny metabolisman'ny kolesterola amin'ny aty ny powders Guggulsterone. Ny pilotra Guggulsterone koa dia mety hampitombo ny famokarana hormones ny tiroida ary matetika dia tafiditra ao amin'ny fanafarana fahaverezan'ny lany ho amin'izany tanjona izany. Ny famokarana ggggul dia tokony horaisina amim-pahamalinana noho ny mety atahorany.
Nandritra ny an'arivony taona dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny akoran'ny guggul mba hanasitranana rheumatisma, arthritis, aretin'ny neurologique, hemorrhoids, aretina ary aretina hoditra. Ny fitsaboana amin'izao fotoana izao dia nahita porofo fa afaka manefa ny atiny ny mpanotrona Guggulsterone, hanitsiana ny aretina amin'ny fatran'ny lipida toy ny kolesterola avo. Amin'ny alàlan'ny rafitra tsy fantatra dia mampitombo ny famokarana hormones ny tiroida Guggulsterone, mampitombo ny fampiasana angovo ao amin'ny vatana.
Fifandraisana amin'ny fitsaboana
Tsy tokony horaisina amin'ny ady atao amin'ny warfarin, aspirine, medikaly tsy misy alikaola, na fanafody hafa izay manakana ny fitsaboana amin'ny ra. Ny fitomboan'ny Guggul dia mety hampitombo ny mety hitera-doza marefo na tsy voafehin-tsakafo rehefa entina miaraka amin'ireo zava-mahadomelina ireo. Ny fitrandrahana Guggul dia mety hifaneraserana amin'ny hormonina ho an'ny hormonina na fanafody hafa ampiasaina amin'ny aretin'ny tiroida. Miara-miasa ny gaggul sy ny fanafody tiroida dia mety hampiakatra ny alahelon'ny tafio-drivotra mampidi-doza, izay mety hitera-doza ho an'ny hormonina be dia be. Ny fitrandrahana Guggul dia mety hampihenana ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina propranolol na diltiazem.
Fifandraisana amin'ny aretina
Ireo izay voan'ny aretin'ny tiroida, anisan'izany ny hypo-hyperthyroidism, dia tokony hifantina amin'ny dokotera alohan'ny handraisana ny guggul. Ny olona manana aretina amin'ny aty na voan'ny aretina dia tsy mety manimba ny guggul amin'ny ankapobeny ary tsy tokony handray izany. Amin'ny ankapobeny, tsidiho amin'ny dokoteranao mba hamaritana raha azo antoka ny fitsaboana guggul anao.
Ny mety ho fihenan-tsika hafa
Ny fanazavana siantifika kely dia misy eo amin'ny mety hisisika ny glugul. Tsy fantatra raha azo atahorana ny guggul mandritra ny fitondrana vohoka, fa noho ny fiantraikany amin'ny hormones ho an'ny hormone sy ny metabolisma lipo dia mety ho azo alaina izany. Ny fitrandrahana Guggul dia mety miteraka aretina, menaka, fikorontanan'ny tosidra sy akondro. Ny fanehoan-kevitra tsy ara-dalàna momba ny fitrandrahana guggul dia notaterina.
Ny vovobony Guggulsterone dia ligandan'ny heterônôma mpandoto ny steroid, ary fantatra fa manana ny hetsika manaraka:
Mpanohitra antagonista Mineralocorticoid (Ki = 39 nM)
Progesterone receptor partial agonist (Ki = 201 nM)
Glucocorticoid antagonist receptor (Ki = 224 nM)
Androgen receptor antagonist (Ki = 240 nM)
Ny agonista mpandidy Estrogen (Ki> 5 μM; EC50> 5 μM)
Ny mpanohitra antagonista Farnesoid X (IC50 = 5-50 μM)
Ny agonista mpikirakira Pregnane X (EC50 = 2.4 μM ((Z) -isomer))
Ny vovoka Guggulsterone dia hita ao amin'ny fikarohana biby ho mavitrika; Ny habetsahan'ny fivoaran'ny 42.9% dia azo avy amin'ny fampidirana am-bava amin'ny raty, miaraka amin'ny antsasak'adiny manodidina ny ora 10 ao amin'io karazany io, izay manondro profilo momba ny pharmacokinetika tsara.
Raw Guggulsterone vovoka Marketing
Ahoana no hividianana vovoka Guggulsterone avy any AASraw
Gushgulsterone Raw Powder Recipes:
Guggulsterones (guggul) noho ny fatiantoka mavesatra sy ny fambolena
Mitoxantrone HCL poids
Hydralazine HCL poids
Proviron (Mesterolone) vovoka
Trenavar vovoka (4642-95-9)